Midowga Yurub oo dilka xildhibaan Aamina Maxamed ku qeexay mid siyaasadeed - Caasimada Online
Home Warar Midowga Yurub oo dilka xildhibaan Aamina Maxamed ku qeexay mid siyaasadeed
Midowga Yurub oo dilka xildhibaan Aamina Maxamed ku qeexay mid siyaasadeed
Muqdisho (Caasimada Online) – Ururka Midowga Yurub ayaa war kasoo saaray weeraradii xalay gilgilay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kuwaas oo dhaliyey dhimashada Aamino Maxamed iyo dad kale oo uu ku jiro xildhibaan hore Xasan Cali Cabdi Dhuxul.
Qoraal kooban oo ay soo saartay safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya, Ambassador Tiina Intelmann ayaa si gaar ah tacsi loogu dilay ehellada xildhibaanada Aamino Maxamed Cabdi.
Tiina Intelmann ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in Midowga Yurub uu si adag oo xoogan u cambaareynayo dilalka ku saleysan arrimaha siyaasadda, maadaama lagu jiro kala guur.
“Rabshadaha ma ahan wado horay u wadeysa dalka Soomaaliya. Midowga Yurub waxaa uu cambaareynayaa dilalka ku saleysan siyaasadda. Waxaan tacsi u dirayaa qoyska xildhibaan Aamina”, ayey tiri safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliyaiyada oo u tacsiyadeeysay qoyska xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi.
Weeraradan oo dhacay fiidkii hore ee xalay ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya illaa 20 qof, iyada oo ay ku dhaawacmeen 30 kale, sidoo kale waxaa ka dhashay burbur xoogan